Ogaden News Agency (ONA) – Booliiska Wayaanaha oo Kuwareeray Qaab Shaqeedka Dhalinyarada Qeeroo.
Booliiska Wayaanaha oo Kuwareeray Qaab Shaqeedka Dhalinyarada Qeeroo.
Posted by Dulmane	/ January 8, 2018
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay ciidanka Booliiska wayaanuhu umaara la’yihiin Ururka Dhalinyara ee qoomiyada Oromada ee lagu magacaabo Qeeroo.
Sida xogta aan kuhelayno Booliiska wayaanaha ayaa geed dheer iyo mid gaabanba ufuulay sidii ay ulasocon lahaayeen dhaq dhaqaaq yada ururka dhalinyarada Oromada ee Qeeroo, kuwaas oo tan iyo intii la aas’aasay qaabka ay ushaqeeyaan lagaran la’yahay.
Booliiska wayaanaha ayaa aad isugu mashquuliyay sidii ay uheli lahaayee goobaha ay kusugan yihiin hogaanka ururku iyo waliba qaabka ay ushaqeeyaan oo noqday qaab ka da’a wayn Booliiska Wayaanaha oo ah Booliis aan khibrad lahayn.
Sidoo kale Booliiska wayaanaha ayaa ku guul daraystay in ay ogaadaan meelaha ay ururku Internet-ka kahelaan kadib markii xukuumada wayaanuhu ay jarto khadka Internet-ka oo ah mid siwayn uga qayb qaata kacdoonada shacabka ee Itoobiya kasocda.
Ururka Dhalinyarada Oromada ee Qeeroo ayaa sifudud warbaahinta dunida ulawadaaga sawirada iyo dhacdooyinka kusaabsan kacdoonka shacabka, waxayna ururku awoodeen in ay wariye la’aan warside kasta halkiisa warka ugu geeyaan isagoo maqal iyo muuqaal.
Xukuumada wayaanaha oo u adkaysan wayday wararka diiran ee warbaahintu ay isada isdaba jooga ah u helayso ayaa Booliiska wayaanaha ku amartay in ay ogaadaan xogta dhabta ah ee ururka Qeeroo, kaas oo ilaa iyo hada aan lahelin qaabka uu ushaqeeyo.